Pakistana: Bilaogin’ny Fikorontanan’ny Fotoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 19:47 GMT
Avy any amin'ny hoavy aho no manoratra aminareo amin'ity herinandro ity. Vita ara-potoana ity lahatsoratra ity raha ny tena marina (izay tokony ho vita telo herinandro lasa izay), teo ho eo amin'ny herinandro faharoan'ny volana Jona teo. Ka iangaviako ianareo tsy hieritreritra fa ala olana amin'ny hakamoako fotsiny izao, satria raha ny marina dia nahita lava-kakana iray tao anaty Aterineto aho mamela ahy hivezivezy manodidina ny hoavy sy ny lasa.
Hitako tsy nahy ity lavaka manakorontana ny fotoana ity taorian'ny nisotroako kapoakanà Red Bull telo, Coca-Cola anaty tavoahangy iray litatra ary kapisily 8 anà mpanakana mifantina ny fisintonana indray ny ‘sérotonine’. Lasa ato anatin'ny tontolon'ny aterineto telo herinandro aty amin'ny vanimpotoana hoavy aho, izay misy ahy ankehitriny, izay toa vanimpotoana ankehitriny ihany koa any aminareo. Mbola ao tsara daholo ve? Tsara, faly aho fa miaraka amiko ianareo amin'ity indray mitoraka ity.
Tahaka ny mahazatra, manoratra momba (pejy voafafa) izay tsy sahin'ny ankamaroan'ny olona resahina i Fountainhead; manolotra ny tantaran'ny fitsidihany an'i Espaina (pejy voafafa) i Jaded (aza adinoina ny mamaky ireo lahatsoratra ho avy); manazava ny fanafodin'ny aretina rehetra (rohy maty) i Windmills; miresaka momba ny lalàm-pitondrantena Amerikana i Suspect Paki (tandremo fa tabataba voasokajy ho R izy ity, noho izany tsy maintsy arahina olon-dehibe ny ankizy sy i G.W.Bush rehefa mamaky azy io); manome ireo tena antony ao ambadiky ny asan'ny Kaominin'i Karachi amin'izao fotoana i Sami Shah (ilay mpanao hatsikana ao Karachi); Manome ‘titbits’ (fosafosa) vitsivitsy mahaliana avy ao amin'ireo gazety Pakistaney i Glasshouse (heveriko fa mety ho ‘Tidbits’ no tiany tenenina kanefa fantatra fa manasongadina ny politika izy, mety ho titbits izany); manolotra ny hiram-pirenena Amerikana navadiko amin'ny fomba fijerinà mpitahiry ny nentin-drazana amin'ny fomba vaovao aho, ary farany, tiako ihany koa ny hanazava ireo fitetezako farany noraketiko anatin'ny bilaogy an-tsary ho porofon'ny endrikedrikanà fahasalam-tsaiko.
Heveriko fa ampy ireo rohy eo ambony ireo ho an'ny vakiteny ny bilaogy Pakistaney amin'ity herinandro ity. Tsy ho ela aho dia hiverina miaraka aminà lahatsoratra mampangitakitaka. Hanandrakandrana ilay mpanakorontana fotoana aho (ampian'ilay marotoa lava filalaovana ‘polo‘) ary hiverina any amin'ny lasa ka hanoratra ho an'ny GV, amin'izay ianareo tsy mila miandry mafy satria efa voavakinareo ilay izy.